Cimilada dhulbaraha | Saadaasha Shabakadda
El Cimilada Equatorial Waa nooc ka mid ah cimilada kulaylaha oo lagu garto celcelis ahaan heerkul sanadle ah oo inbadan oo naga mid ahi ku riyoodaan: ka sarreeya 23ºC. Roobabku waa kuwo aad u tiro badan, oo wax walba ka sarreeya, oo joogto ah, sidaa darteed gobollada nasiibka u leh ee ay cimiladan ku leeyihiin, waxay ku raaxeysan karaan kaymo iyo hawd cagaaran, nooca ay tahay inaad ku sii wadato dhaqaajinta caleemaha geedaha timirta iyo geedaha haddii aad rabto socon karo.
Sidaa darteed, waa mid ka mid ah cimilada ugu jecel, laakiin waxay ku taal aagag aad u yar ama gobollo. Aynu wax badan ka ogaanno jawigan xiisaha iyo xiisaha leh.
1 Waa maxay iyo xaggee bay ku taal cimilada dhul-baraha?
2 Nolosha jawiga dhul-baraha
Waa maxay iyo xaggee bay ku taal cimilada dhul-baraha?
Cimiladan waxaa lagu gartaa yeelasho roobab aad u badan oo aad u tiro badan, ka weyn 1500-2000mm sanadkii, leh qiyaasta kuleylka ee sanadlaha ka hooseeya 3ºC. Ma jiraan xilliyo, laakiin had iyo jeer waxay haysaa in ka badan ama ka yar isla heerkulka oo in ka badan ama ka yar litir biyo ah ayaa hoos u dhaca bil kasta. Waxay ku taalaa inta udhaxeysa 5ºN iyo 5ºS, meelaha ku dhow dhulbaraha Dhulka, oo ah dhul aad u hooseeya, oo dabaysha jirta ay tahay dabaysha ganacsiga. Waad ku mahadsantahay roobabka joogtada ah, kaliya ma ahan dhulku cagaar, laakiin sidoo kale laba ka mid ah wabiyada ugu xoogga badan iyo, sidaa darteed, kuwa ugu muhiimsan adduunka: Amazon ee Koonfurta Ameerika iyo Koongo Afrika.
Haddii aan ka hadalno meelo cayiman, waad ku raaxeysan kartaa cimiladan haddii aad tagto meelaha basaska amazon Koonfurta Ameerika, ka Koongo dooxada iyo xeebta gacanka ka yimid Guinea gudaha Afrika, Jasiiradaha Indooniisiya iyo koonfurta Malay Peninsula Koonfur-bari Aasiya.
Wabiyada ku yaal goobahan waa kuwo aad u balaaran, gaar ahaan roobab xoog badan oo da’aya awgeed. Laakiin marka lagu daro, uumi baxa ayaa ah mid aad u daran oo isla markiiba heerkulku xoogaa hoos u dhaco, roobab mahiigaan ah ayaa da'a oo dhulka geeya webiyada.
Si aan fikrad kaaga siino cimilada ku dhow dhow xariiqa dhulbaraha ee meeraha, waxba kama fiicna inaad la tashato shaxda cimilada. Mid ka mid ah sawirka kore wuxuu u dhigmaa kan New Guinea, Afrika iyo, sidaad u aragto, roobabku waxay si gaar ah u badan yihiin bisha Luulyo, xoogaa weyna ka yar yihiin bisha Maarso. Si kastaba ha noqotee, heerkulka ayaa had iyo jeer lagu hayaa kor 24ºC.
Nolosha jawiga dhul-baraha
Cimilada noocan ahi waa halka ay ku kala badan yihiin kaladuwanaanta noolaha adduunka. Labadaba dhirta iyo dhirta ayaa aad u kala duwan, laakiin waxaan si gooni ah u arki doonnaa:
Sidaan soo sheegnay, hawdka iyo keymaha ficil ahaan looma gudbikaro. Waxaa jira laba nooc: the keymaha ombrophilous, taas oo lagu gartaa yeelashada biyo joogto ah, iyo semiombophilic, taasi waa in la yiraahdo, oo ay ku dhex maraan xilli "qalalan". Tan dambe maahan inay jiraan xilliyo, laakiin waa inay jiraan dhir aan awood u lahayn inay u adkeysato hoos u dhaca ku yimaadda biyaha sidaas darteedna, waxay caleemo saari doonaan caleemohooda illaa ay ka fiicnaadaan xaaladaha biyaha.
Weli, labadaba waxay noqon doontaa mid aad u adag in la helo hal nooc oo xukumaMaaddaama dhammaantood, laga bilaabo xilliga ay biqinayaan, samee wax kasta oo suurtagal ah si aad u qabato qorraxda inta ay u baahan tahay. Waxyaabaha qosolka badanina waa in dhammaan »dabaqyada» ay jiraan dhir, dhammaantiis, xitaa laamaha geedaha ee ay qorraxda falaadheeda si dhib yar ku gaari karto.
Ka mid ah dhirta ugu wakiilka ah waxaan ka helnaa orchids, las bromeliads, badan calaacal (Cocos nucifera, Astrocaryum chambira, Oenocarpus mapora, iyo waxyaabo kale), Eucalyptus (sida eucalyptus qaanso roobaad ama Eucalyptus deglupta), hevea, bamboo, ferns, iwm Dabcan, ficil ahaan ma jiraan geedo duurjoog ah, maadaama tartanku yahay mid aad u daran oo geedo, geedo, timir iyo fuulista dhirta isla markiiba la wareegaan meel ay ku koraan.
Xayawaanka halkan ku nool cabir ahaan aad bey u yar yihiin, maadaama ay dhaqdhaqaaq badan ku dhaqaaqi karaan inta aan la dareemin, sida kalluun y raham sida ugufiican kan indhaha cas, laakiin waxaa jira kuwa ka waaweyn: monos, duurjoogta (jaguar, puma), xalaasha (sida casaan), qulqulka, alligators, yaxaasyada, toucans, macaws...
Dabcan, bini aadamku halkan ayuu ku nool yahay. Dadka asaliga ah waxay ku nool yihiin wada noolaansho buuxda oo dabiici ahuruurinta miraha, iyo ugaarsiga xoolaha si ay u noolaadaan. Waqtigaan la joogo, dad yar ayaa ku nool kaymaha, taas oo u saamaxday iyaga inay sii wataan dhaqankooda iyo dhaqankooda iyaga oo aan dhibaato badan qabin.
Si kastaba ha noqotee, bani'aadamka casriga ah wuxuu si sii kordheysa ugu baahan yahay boos badan isaga iyo qoyskiisa, dhul beereed badan, xarumo badan oo wax laga iibsado, inbadan ... wax kasta, sidaa darteed wuxuu u hanjabayaa meelaha yar ee cagaaran ee ku haray Dunida iyo iyaga, iyaga, asalkooda dadyowga. Xaqiiqdii, Koonfur-bari Aasiya kaymaha ayaa dib u guranaya iyadoo ay sabab u tahay abuuritaanka bariiska, shaaha, sonkorta iyo hevea.
Hadda oo aad wax badan ka ogtahay cimilada dhul-baraha, maxaad u malaynaysaa? 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Cimilada » Cimilada Equatorial
WAAN KA JECLAHAY IN AAD KA QAADATO DHAMMAAD QEYBTA DHAMMAAD EE AAD SABABTA UGU HAYSATO
Ku jawaab PUTTR
5 shay oo aadan ka ogeyn tsunamis